Home Wararka Al Shabaab oo sheegtay dil ka dhacay Muqdisho
Al Shabaab oo sheegtay dil ka dhacay Muqdisho
–Qoraal kasoo baxay Al-shabaab ayaa lagu shegay in ay Nawaaxiga Xaafadda Carafaad Dagmada Yaqshid ee Gobolka Banaadir ay ku dileen Mid kamid Ergadii soo dooratay Xildhibaanadda Cusub ee Golaha Shacabka BFS Gaar ahaan Xildhibaanada Gobollada Waqooyi-Somaliland.
Al-shabaab ayaa qoraalka ay soo dhiheen baraharaha ay Internetka ku leeyihiin waxa ay sidoo kale ku sheegen in qofka ay dileen Magaciisu ahaa Xuseen Ciidgale sida ay shegeen.
Saraakiisha Amaanka Dowladda wali kama aysan hadlin dilka Wallow Goobta uu dilku ka dhacay ay gaareen Ciidamo ka tirsan Dowladda.
Dagaalmayaasha Al-shabaab ayaa horay uga digay Ergada iyo Odoyaasha wax dooranayo iyagoona Sheegay in ay bartilmaameedsan Doonaan.
Previous articleGuddiga doorashooyinka oo Saddex Bilood mushaar qaadan
Next articleCiidanka AMISOM oo Qarax Lala Eegtay.
Soomaali ku xanibnaa dalka Kenya oo dalka dib loogu soo celiyay.